Gobolo kamid ah dalka Maraykanka oo kasoo horjeestay Amarkii Donald Trump | SAHAN ONLINE
Gobolo kamid ah dalka Maraykanka oo kasoo horjeestay Amarkii Donald Trump
NEW YORK – Lix gobol oo ka tirsan gobollada dalka Maraykanka ayaa sheegay iney halgan sharci ah u geli doonaan sidii ay u joojin lahaayeen amarka labaad ee uu Madaxweyne Donald Trump ku mamnuucay in muwaadiniinta lix dal soo galaan Maraykanka.
Hawaii ayaa noqday gobolkii ugu horeeyey oo dacwad ka gudbiya amarka Donald Trump maalintii arabacada ahayd,waxayna qareenada Hawaii ayaa ku doodad in amarka Trump uu dhaawacay muslimiinta ku nool gobolkan kuyaalla badweynta Pacific-ga.
Shan gobol oo ay kamid yihiin Washington,Oregon,Minnesota,New York iyo Massachusetts ayaa maalintii shalay oo khamiis ahayd ku bray dacwadda,waxaana lagu wadaa in maxkamadda Federaalka u gudbiyaan todobaadka soo socda.
Xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Washington ,Bob Ferguson ayaa sheegay in amarka cusub ee Madaxweyne Trump uu yahay mid kooban marka loo fiiriyo kii hore balse aysan taasi micnaheedu ahayn in uu daaweeyey dhibaatooyinkii dastuuriga.
Bob Ferguson ayaa sheegay in dacwada lixda gobol ay tahay mid adag oo sharci ah.